Imiyalo yokusetshenziswa kwesikrini sokudlidliza komugqa | Haiside
You are here: Home / Izindaba / Uncategorized @zu / Imiyalo yokusetshenziswa kwesikrini sokudlidliza komugqa
2021-08-02 /in Uncategorized @zu /by admin
Isikrini sokudlidliza komugqa sakhiwe ikakhulukazi ngebhokisi lesikrini, ifreyimu enezikhala, imeshi yesikrini, imoto yokudlidliza, isisekelo sezimoto, isiphethu esinciphisayo, kanye nobakaki. Kusetshenziswa isidlidlizi sesikrini esidlidlizelayo njengomthombo wokudlidliza, okokusebenza kuphonswa phezulu esikrinini ngenkathi kuhamba phambili kulayini oqondile. Okokusebenza kungena ethekwini lomshini wokuhlola ngokulinganayo kusuka ku-feeder futhi kukhiqize ukucaciswa okuningana kusikrini esinezendlalelo eziningi. Izinto ezikhulukazi nezingaphansi zikhululwa ngokulandelana ezitolo zazo. Inokusetshenziswa kwamandla okuphansi, ukukhipha okuphezulu, isakhiwo esilula, ukugcinwa okulula, isakhiwo esifakwe ngokuphelele, akukho ukuchitheka kothuli, ukukhishwa okuzenzakalelayo, futhi kufaneleke kakhulu ekusebenzeni kolayini womhlangano.
Izici zesikrini isixwayisi sesikrini
(1) Idizayini yomshini wesikrini yinhle futhi kulula ukuyihlanganisa. Umuntu oyedwa angasebenzisa umshini wesikrini.
(2) Uma kuqhathaniswa nezinye izikrini zokudlidliza ezihlobene, inendawo enkulu yokuhlola namandla wokucubungula.
(3) Idizayini eyingqayizivele yokwakheka kwesikrini yenza kube lula futhi kusheshe ukufaka esikrinini (imizuzu emi-3 kuye kwemi-5 kuphela). Ngaphezu kwalokho, lo mklamo uvumela ukusetshenziswa kwezikrini ezahlukahlukene zezinto ezibonakalayo.
(4) Inetha likamama liyisekela ngokuphelele i-mesh emihle, ngakho-ke i-mesh enhle ingaba nesikhathi eside sokuphila, futhi ukusetshenziswa kwezinto ezinhle zokudla okuncishisiwe kuncishisiwe, okunganciphisa izindleko eziningi zenqubo yokukhiqiza yesikhathi eside.
(5) Isikrini sokudlidliza komugqa sinezici zokunemba okuphezulu kokuhlola, isakhiwo esilula, ukugcinwa okulula, ukusetshenziswa kwamandla aphansi, umsindo ophansi, ukubekwa uphawu okuhle, ukunciphisa ukungcola kothuli, impilo yesikrini eside, futhi kungasetshenziselwa imisebenzi ezenzakalelayo ekukhiqizeni ulayini womhlangano .
Ukusebenza komgomo wesikrini sokudlidliza komugqa
Isikrini sokudlidliza komugqa siqhutshwa ama-motor amabili adlidlizayo. Lapho ama-motors amabili adlidlizayo esebenza ngokuvumelanayo futhi ezinhlangothini eziphikisanayo, amandla athokozisayo akhiqizwe ngamabhulokhi eccentric akhansela omunye nomunye esiqondisweni esifana ne-motor axis, kanye nezitaki ohlangothini oluqondayo kuya ku-eksisi yemoto ukwakha amandla, ngakho-ke impahla isesikrinini sokudlidliza okuhambisanayo I-trajectory yokunyakaza emshinini ukunyakaza okuqondile okuqonde phambili. Imiphini emibili yemoto ine-angle yokuthambekela ehlobene nobuso besikrini. Ngaphansi kwamandla ahlanganisiwe wamandla athokozisayo namandla uqobo adonsela phansi, izinto ziphonswa phezulu futhi zigxume ziye phambili esibukweni ngokunyakaza okuqondile, ukuze kufezekiswe inhloso yokuhlola nokufaka izinto.
Ukufakwa kwesikrini okudlidlizayo
1. Ibhokisi lesikrini: Ishiselwe kusuka ezingcwecweni zensimbi eziningana ezinobukhulu obuhlukile, ngamandla athile nokuqina, futhi yingxenye eyinhloko yomshini wesikrini.
2. Uhlaka lwe-Mesh: Lenziwe ngokhuni olunokuphambuka okuncane, okusetshenziselwa ukugcina isikrini sicabalele futhi siqinile ukufeza ukuhlolwa okujwayelekile. Uma amandla adonsela phansi athile makhulu noma okukhiphayo kukhulu, ifreyimu yesikrini sensimbi ingasetshenziswa.
3. Isikrini: Sebenzisa isihlanganisi sesikrini sensimbi engagqwali sikazwelonke esihlanganisiwe.
4. Ukusetshenziswa nokugcinwa kwendlela yokudlidliza i-screen exciter kungabhekisa kwimanuwali yayo yokufundisa.
5. Isisekelo sezimoto: Isisekelo sezimoto zohlobo olujwayelekile (imoto ifakiwe ngaphansi kwebhokisi lesikrini) iyasuswa. Izikulufo zokuxhuma kufanele ziqiniswe ngaphambi kokusetshenziswa, ikakhulukazi isisefo esisha kufanele siqiniswe siphindaphindwe ezinsukwini ezintathu ngaphambi kokuqulwa kwecala ukugwema ukukhululeka. ingozi.
6. Intwasahlobo yokudambisa ukudlidliza: ivimbela ukudlidliza ukuthi ingadluliselwa phansi futhi isekele isisindo esigcwele sebhokisi lesikrini. Lapho ufaka, intwasahlobo kufanele ibhekane nomhlabathi.
7. Ubakaki: Yenziwe ngensimbi yesiteshi futhi isekela umzimba omkhulu wesikrini esidlidlizayo. Izinsika kufanele zibhekane ngqo nomhlabathi ngesikhathi sokufakwa, futhi izinsimbi zesiteshi ezingaphansi kwezinsika ezimbili kufanele zifane. Iziphethu zenjoloba zivivinyelwe ukuqina ngaphambi kokuba zisuke efektri. Iziphethu ezinokuqina okufanayo (noma okufanayo) kufanele kukhethwe futhi kubekwe ezindaweni ezahlukahlukene ezisekelayo zesikrini esifanayo esidlidlizayo.
Lapho ufaka, beka isiphethu senjoloba esihlalweni esiphansi sokweseka, yenza umphathi esihlalweni sokweseka angene emgodini ongaphakathi wentwasahlobo, bese uphakamisa umzimba omkhulu. Qiniseka ukuthi imbobo yangaphakathi yomthombo wenjoloba igxile kubasi wepuleti lokusekela. Ibhokisi lehliswa liqonde phezulu bese libekwa emthonjeni wenjoloba. Ngalesi sikhathi, ukuphakama kwentwasahlobo yenjoloba endaweni ngayinye yokusekela kufanele kube okufanayo, nephutha akufanele libe likhulu kuno-2mm. Ukuxhunywa kwengxenye ngayinye yomshini we-sieve kufanele kuqine futhi kuthembeke, wonke amabhawodi akumele akhululeke, futhi akumele kube nomsindo ongajwayelekile engxenyeni ngayinye. Igebe elincane phakathi kwengxenye edonsa amandla emzimbeni omkhulu nezinto ezizinzile ezizungezile ngu-30-50mm.
Ukuhlolwa njalo nokugcinwa kwesikrini sokudlidliza komugqa
1. Isikrini sokudlidliza komugqa kufanele sihlonyelwe amadivayisi wokuvikela kagesi.
2. Esigabeni sokuqala sokusebenza, hlola imishudo yesikhonkwane okungenani kanye ngosuku ukuvimbela ukukhululeka.
3. Lapho isiqondiso sokujikeleza kwemoto singahlangabezani nezidingo, lungisa ukulandelana kwesigaba samandla.
4. Imoto kufanele ifakwe kahle. Gcwalisa i-lithium grease (ZL-3) njalo emavikini amabili noma kunjalo. Lapho ufaka uphethiloli, engeza inani elifanele lamafutha e-lithium ngenkomishi kawoyela. Lapho usebenzisa amabheringi avaliwe, imoto ayinayo inkomishi kawoyela.
5. Ngemuva kokuthi okokusebenza sekusebenza amahora ayi-1500, amabheringi kufanele ahlolwe futhi afakwe endaweni yawo ngokushesha uma kukhona umonakalo omkhulu.
6. Lapho isikrini somugqa esidlidlizayo sisetshenziswa futhi ngemuva kokupakwa isikhathi eside, ukumelana nokuvikela kufanele kukalwe. Kufanele ibe nkulu kuno-0.5 megohm ngesilinganiso esingu-500V megohmmeter.
Ngaphambi kokuqala isikrini esiqondile sokudlidliza, hlola ukuthi ngabe kukhona yini izithiyo ezivimbela ukusebenza komshini wesikrini nokuthi ngabe amabhawodi wokuxhuma aboshelwe yonke indawo, ikakhulukazi amabhawodi wokulungisa we-exciter, isihlalo sokusekela, ne-screen plate kufanele aqiniswe futhi. Bheka ukuthi izinkomba zokujikeleza kwama-motors amabili we-vibration noma ama-exciters ahlukile yini. Uma izinkomba zokujikeleza ziyefana, shintsha ukuxhumeka kwamandla kwemoto eyodwa ukuze izinkomba zokujikeleza kwama-motors amabili ziphikisana. Ngemuva kwamahora ama-4 wokusebenza okuqhubekayo, linganisa izinga lokushisa lokuthwala. Amazinga okushisa akufanele adlule ama-75 ° C. Ngaphambi kokuthi umshini wesikrini umiswe, okuphakelayo kufanele kumiswe kuqala, bese kumiswa ngemuva kokuthi into ebonakalayo yesikrini isiqediwe. Ngemuva kwekhefu, hlanza izinto kanye nemfucumfucu ebusweni besikrini ngesikhathi. Imoto edlidlizayo noma isidlidlizi sesikrini esidlidlizelayo kufanele ifakwe uphethiloli kanye ngemuva kwezinyanga ezintathu zisetshenzisiwe, ukulungiswa okuncane njalo ezinyangeni eziyisithupha, nokulungiswa okukhulu njalo ngonyaka.
Izinyathelo zokufaka, ukulungisa iphutha nokuqapha kwe-vibrator screen exci... Isingeniso kumgomo wokusebenza nokwakheka kwesikrini sokudlidliza komugqa